USolwazi Refiloe Masekela.
Udokotela wezingane wezifo zesifuba, umcwaningi neNhloko YoMkhakha Wokwelapha Izingane e-UKZN uSolwazi Refiloe Masekela uqokelwe ukuba YiSekela Lophiko Lwezokwelapha Amaphaphu Abadala nabaNcane i-Adult and Child Lung Health Section (i-ACLH) yi-International Union against Tuberculosis and Lung Disease.
Inyunyana, eyasungulwa ngonyaka we-1920 njengeyokuqala yohlobo lwayo, ibe neqhaza eminyakeni edlule emhlabeni ekwelulekeni ngenqubo nocwaningo ezinhlelweni zesifo sofuba nezamaphaphu.
I-ACLH inohlelo lweminyaka emihlanu lokuphucula ezempilo zamaphaphu, eqhulwini ibeke isifo sofuba ne-chronic obstructive pulmonary disease(i-COPD), isifo samakhaza emaphashini ezinganeni nezingozi ezidalwa yizimo zezemvelo ezidala izifo zamaphaphu.
UMasekela uthe: ‘Kuyangijabulisa ukuqokelwa ukuba YiPhini LikaSihlao we-ACLH kanti ngethemba ukuthi ngizophosa esivivaneni ngimele i-Afrika ezingxoxweni zomhlaba ngezempilo zamaphaphu. Izinto ezithinta amaphaphu kusukela ekuhlaleni kwesisu kuze kufinyelele ebudaleni kumqoka uma sikhuluma ngokulwa nezifo ezithathelanayo nokuphucula impilo.
‘NjengeSekela LikaSihlalo we-Adult and Lung Health Section, sizobeka eqhulwini ezempilo zamaphaphu emazweni ahluphekayo. Sizophosa esivivaneni ezingxoxweni zezingqungquthela zomhlaba wonke, sicobelelane ngocwaningo, sandise isibalo sabantu abangaba semkhankasweni wokuphucula ezempilo zamaphaphu emiphakathini entulayo.’
Uzoqala esikhundleni sakhe ngengqungquthela yaminyaka yonke i-World Conference on Lung Health kuMfumfu (October) nonyaka.
UMasekela wathola iziqu zobudokotela e-Wits, waqeqeshelwa ukuba ungoti wezifo zezingane e-University of Pretoria ne-Fellowship in Paedetric Pulmonology e-Catholic University eLeuven e-Belgium nase-University of Pretoria.
Uthanda ukucwaninga ngesifo somgudu wokuphefumula ezinganeni njengalezo ezinesandulela-ngculazi. Uthanda ukuxilonga isimo samaphaphu, ikakhulukazi indlela amaphaphu asebenza ngayo ezinganeni nasebantwini abadala base-Afrika.
Useke washicilela amaphepha ocwaningo, wabhala izahluko ezintathu ezincwadini zocwaningo ngezifo zamaphaphu ezinganeni. Useke wethula ucwaningo lwakhe ezingqungqutheleni nasezifundweni ezweni lonke nasemhlabeni jikelele kanti unguthisha onentshisekelo othanda ukufundisa ezingeni leziqu zokuqala neziphezulu, weluleka izitshudeni zeMasitazi ezingu-13. Ungumcwaningi wezinga elingu-C3 le-NRF, kanti useke waba ngumbuyekezi wamabhuku ocwaningo namaphepha ocwaningo obudokotela.